Abantu bokufika abagonywe ngokuphelele bangangena e-US kusukela ngoNovemba 8
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Abantu bokufika abagonywe ngokuphelele bangangena e-US kusukela ngoNovemba 8
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Shopping • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Izivakashi ezigonywe ngokuphelele zingangena e-US kusukela ngoNovemba 8.
Imishanguzo ye-COVID-19 evunyelwe yi-World Health Organisation (i-WHO) engasetshenziswanga noma egunyaziwe e-US izokwamukelwa njengendlela yokugoma evumelekile, enikeza ukukhanya kwe-AstraZeneca eyenziwe yi-UK, kanye ne-Sinopharm yase-China ne-Sinovac.
I-US iphakamisa imikhawulo yokuhamba yezivakashi zomhlaba wonke ezigonyelwe ngokuphelele i-COVID-19.
Izihambi zakwamanye amazwe zigonywe ngokuphelele i-COVID-19 zizovunyelwa ukungena e-US kusukela ngoNovemba 8
Inqubomgomo entsha yase-US iqondiswa impilo yomphakathi, eqinile, futhi engaguquguquki, kusho i-White House.
I-White House imemezele namuhla ukususwa kwemikhawulo yezokuvakasha ye-COVID-19, futhi yathi bonke abahambi bakwamanye amazwe abagonywe ngokuphelele nge-coronavirus bazovunyelwa ukungena eMelika kusukela ngoNovemba 8.
Ongumsizi kanobhala wezindaba e-White House uKevin Munoz ukuqinisekisile namuhla ukuthi "inqubomgomo entsha yezokuvakasha yase-US edinga ukugonywa kwabahambi bakwamanye amazwe abaya e-United States izoqala ngoNovemba 8."
UMnu. Munoz uphinde wabhala ku-Twitter ukuthi le nqubomgomo "iqondiswa ezempilo zomphakathi, iqinile futhi ayishintshi."
Kuqinile Umkhawulo wokuhamba wase-USs igcine izivakashi eziyizigidi ezivela eChina, Canada, Mexico, India, Brazil, iningi laseYurophu ngaphandle kwase-United States, zikhubaze ezokuvakasha zase-US, futhi zalimaza nomnotho womphakathi wasemngceleni.
Ngenyanga edlule, i-White House yathi izosusa imikhawulo kubahambi bomoya abavela emazweni angaphezu kwama-30, kufaka phakathi iChina, iNdiya, i-Iran kanye neningi laseYurophu kusukela ekuqaleni kukaNovemba, kepha yeka ukunikezela usuku oluqondile.
Ngolwesibili, US Izikhulu zithi izwe lizosusa imikhawulo yokuhamba emingceleni yalo yomhlaba kanye nokuwela izikebhe neCanada neMexico kulabo abagonywe ngokuphelele.
Imishanguzo ye-COVID-19 evunyelwe yi I-World Health Organization (WHO) ezingasetshenziswanga noma ezigunyaziwe e-US zizokwaziwa njengendlela yokugoma evumelekile, okunikeza ukukhanya kwe-AstraZeneca okwenziwe yi-UK, kanye neSinopharm ne-Sinovac yaseChina.
ICanada ivule kabusha umngcele wayo womhlaba ne-US ekuqaleni kuka-Agasti ukuze kugonywe ngokuphelele abantu baseMelika ngesivivinyo esibi se-COVID-19 sokuhamba okungabalulekile. Ukuntuleka kokuphindisela komakhelwane wakhe, nokho, kudonse izikhalazo ezikhulwini zaseCanada.
Ukuvinjelwa kwenani elikhulu lezakhamizi ezingezona zaseMelika ezingena eMelika kuphoqelelwe izinyanga ezingaphezu kwe-18 ngenxa yobhadane lwe-coronavirus. OwayenguMongameli uDonald Trump waqala wamisa ukuvinjelwa kwabahambi bezindiza abavela eChina ekuqaleni kuka-2020, wabe esedlulisela lo mkhawulo engxenyeni enkulu yeYurophu.
I-US Travel Association ikhiphe isitatimende esilandelayo ngesimemezelo sokuthi i-US izovula ngokusemthethweni imingcele yayo kubagonyeli bamazwe angaphandle ngoNovemba 8:
“Sekuyisikhathi eside i-US Travel icele ukuthi kuvulwe imingcele yethu ngokuphepha, futhi samukela isimemezelo sabaphathi bakwaBiden sosuku olubekiwe ukwamukela abahambi bamazwe abavela emithini abagonyiwe.
“Usuku lubaluleke kakhulu ekuhleleni - ezindizeni, kumabhizinisi asekelwa ngohambo, nasezigidini zabahambi emhlabeni wonke manje abazothuthukisa izinhlelo zokuhambela i-United States futhi. Ukuvulwa kabusha kwezivakashi ezivela kwamanye amazwe kuzohlinzeka ngomnotho futhi kusheshise ukubuya kwemisebenzi ehlobene nokuhamba ebilahlekile ngenxa yemikhawulo yezokuvakasha.
"Sishayela ihlombe abaphathi ngokuqaphela ukubaluleka kokuhambela amazwe omhlaba kwezomnotho wethu nasezweni lethu, kanye nokusebenza ngokuvula imingcele yethu ngokuphepha nokuxhuma iMelika emhlabeni."
I-Delta yengeza izindiza ezintsha ezingaphezu kwe-100 ezisuka eNew York
I-Brand New Indonesia: Sebenza Kanzima, Uhlakaniphile futhi Uqotho
I-Cathay Pacific ihoxisa izindiza ngemuva kokuthi abasebenzi benqabe okusha ...